Ivenkile yokuThengisa eLagardère kunye neLima Airport Partners Oovulindlela Inzuzo-yokwabelana ngesivumelwano simahla ePeru
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Ivenkile yokuThengisa eLagardère kunye neLima Airport Partners Oovulindlela Inzuzo-yokwabelana ngesivumelwano simahla ePeru
isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
I-Lagardère Travel Retail kunye neLima Airport Partners (LAP), inkampani yaseFraport, ngoovulindlela bexesha elitsha kwiimodeli zeshishini lokuThengisa ngokutyikitya ikhontrakthi yexesha elide ngokubhekisele kwinzuzo yokwabelana nokusebenza kweivenkile ezisimahla zaseJorge-Chávez International Isikhululo senqwelomoya ePeru.
Olu luphumezo lokuqala olukhulu lomzekelo weshishini ekuxoxwe ngalo ngokubanzi kolu shishino.
Imodeli yeshishini iya kulungelelanisa umngcipheko kunye neenzuzo phakathi kwesikhululo seenqwelomoya kunye nomthengisi wentengiso.
Injongo kukukhulisa amandla okukhula, ngakumbi nangakumbi kwimeko yesibetho se-COVID-19 kunye nokwehla kwesiphumo sokugcwala komoya emhlabeni.
Ngomhla wama-20 kuJulayi, iLagardère Travel Retail kunye neLima Airport Partners (LAP), inkampani enkulu yeFraport AG, ityikitye isivumelwano sexesha elide seLagardère Travel Retail ukuze ithathe imisebenzi yokuSimahla kwiLima Airport. Ukuqala kweJanuwari ka-2022, isivumelwano seminyaka eli-13 siza kubandakanya ukwaziswa kwegama lomsebenzi wase-Aelia kwizikhululo zeenqwelo-moya zeDuty Simahla, ezibandakanya i-3,000 yeemitha zesikwere sendawo yorhwebo. Isivumelwano sokwabelana ngenzuzo esitsha sibeka imigangatho emitsha abathembisane kuyo bobabini amaqabane ngexesha lendawo yokungaqiniseki kwixesha lokudityaniswa kwe-COVID. Le modeli yentengiso, ethe yajolisa kakhulu ngexesha lobunzima, kuye kwaxoxwa ngayo iminyaka eliqela njengemfuneko yendaleko yokwandisa ukuthengisa kunye nokwazisa ulungelelwaniso olukhulu kunye namathuba amatsha ngendlela ekwabelwana ngayo ngomngcipheko kunye nezibonelelo phakathi kwamaqela.
Isivumelwano sokwabelana ngenzuzo siza kuvula ingeniso ebonakalayo kuzo zombini iLagardère Travel Retail kunye ne-LAP, kunye namathuba amakhulu otyalo-mali - ekugqibeleni abaxhamlayo abahamba kunye nokwandisa amava esikhululo seenqwelomoya kwiziko elithandwayo laseLima Airport.
Ethetha ngesi sibhengezo, u-Dag Rasmussen, Usihlalo kunye ne-CEO, eLagardère Travel Retail, uthe: “Kuyasivuyisa ukufumana kwi-LAP iqabane elinomqondo ofanayo nelithe labonisa eyona ndlela intsha yokucinga neyokuphayona, ekukhetheni umntu osebenza ngendlela Inkqubo yoKhetho lobuDlelwane obutsha ukuya kwimigaqo yesivumelwano. Njengokuba siqhubeka nokujongana nokungaqiniseki okukhulu kwaye sisitsha kummandla woMzantsi Merika, esi sivumelwano sokwabelana ngenzuzo yivoti enkulu yokuzithemba evela kwi-LAP. Ndinombulelo ngokobuqu ngentembeko nenkxaso yabo ekuguquleni ithiyori ibe sisenzo kunye nokuvula iindlela ezintsha zeemodeli zeshishini kushishino lwethu. Siqinisekile ukuba eli lilitye lesiseko sentsebenziswano kunye nesikhululo senqwelomoya saseLima kunye nesininzi sabanini zabelo Fraport, ukuze sonke sandise ubuchule bethu kwihlabathi liphela kwaye sifikelele ekuyiphindaphindeni le mpumelelo kwenye indawo. ”